जीवन शैली – Page 2
काठमाडौं – दुई वर्षअघि नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माण हुने भनिएको सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर अलपत्र परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै कार्यकालमा शिलान्यास भएको केन्द्रको भवनको निर्माण तीन वर्षमा पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण पूरा भएको छैन भवनको शिलान्यास २०७१ सालमा भएको थियो भने सो केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव सरकारले २०६४ सालमै पारित
अहिले धेरैको निद्रा विथोलिएको छ । निद्राका लागि अनेक उपाय गर्नुपरेको छ । कति त निद्राको चक्की नखाई सुत्नै नसक्ने अवस्थामा पनि छन् । निद्रा किन विथोलिदैछ ? यसमा एकमात्र जवाफ छैन । कसैलाई रोगले, कसैलाई वेचैनीले, कसैलाई महत्वकांक्षाले, कसैलाई निरासाले, कसैलाई चिन्ताले निदाउन दिएको छैन । आखिर ननिदाउँदा के हुन्छ ? निद्रा शरीरको लागि
अक्सर के देखिन्छ भने, यौनका लागि पुरुष नै सधै तत्पर हुनुपर्ने । अर्थात पुरुषको इच्छा अनुसार नै महिलाहरु यौनका लागि तयार हुन्छन् । यौनमा महिला अग्रसर हुँदैनन् । दम्पतीबीच हुने यौन सम्बन्धमा श्रीमानको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ । श्रीमतीहरु यौन सम्बन्धका लागि इच्छा जाहेर गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त उनीहरु आफ्ना पार्टनरकै खातिर मात्र यौनका लागि
८ फागुन । पटक-पटक गर्भ खेर जाने समस्याबाट हैरान काठमाडौंका एक दम्पत्ति उपचारका लागि अनेक ठाउँ धाए । तर, पैसा र समय व्यय मात्र भयो, समस्या समाधान भएन । त्यही क्रममा डा. पवन शर्माको नाम सुनेर उनीहरु पाटन अस्पताल पुगे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ शर्माले परीक्षण गर्दा श्रीमानको
निन्द्राले गर्ने काम धेरै पहिलेदेखि नै वैज्ञानिकहरूका लागि रहस्यको विषय रहँदै आएको थियो । तर कैयौँ आधुनिक अनुसन्धानहरूले निन्द्राले दिमाग र शरीरलाई गर्ने फाइदाबारे नयाँ नयाँ जानकारी बाहिर ल्याएका छन् । यी अनुसन्धानहरूले निन्द्राले शरीरका कोषहरूलाई पुनर्ताजगी गराउँछ र दिमागको विकारलाई हटाउँछ भन्ने देखाएको छ । साथमा हाम्रो सिकाइ तथा स्मरणमा पनि यसको सकारात्मक
आफ्नो व्यक्तित्व र प्रवृत्ति अनुसार हेयर डिजाइनिङ गर्नुपर्छः अनुजा श्रेष्ठ
कपालको साइनो अब टाउको सुरक्षासँग मात्र रहेन । यो समग्र व्यक्तित्वकै एक हिस्सा हो । त्यसैले त अहिले कपालको सुरक्षा मात्र होइन, सौन्दर्यमा पनि ध्यान दिन थालिएको हो । कपाल कस्तो हुनुपर्छ ? यसको सर्वमान्य इकाई छैन । खासगरी सौन्दर्यको हिसाबले । किनभने अनुहारको बान्की अनुसार कपालको साजसज्जा आवश्यक हुन्छ । प्रकृतिको हिसाबले कपाल स्ट्रेट,
तपाईंको घरमा कति जनाले मासु खान छाडे ? कतिले मासु कम खान थाले ? अहिले तपाईंसँगको यसको जवाफ हुनसक्छ । किनभने मासु स्वास्थ्यमैत्री खान्की होइन भन्ने प्रभावसँगै धेरैले आफ्नो छाकबाट मासु कटौती गरिरहेका छन् । मासु सेवन कम गर्दा पूर्णत त्याग गर्दा मूलत तीन फाइदा देखिएको छ । एक, स्वास्थ्यमा सुधार । दुई, पर्यावरण र
अहिले हामीलाई स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त हुनुछ । यसका लागि फलफूल खानुपर्छ भन्ने चेत पनि छ । फलफूल भन्दा त्यसको जुस छिटो र मिठो लाग्छ । त्यसो त बजारमा जुस पाइन्छ, तयारी अवस्थाकै । थरीथरीका फ्लेबर, थरीथरी ब्रान्डको जुस बजारमा उपलब्ध छ । यस्ता फ्रुट जुसले स्वास्थ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ, स्वादिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ । हामी
एकजमना थियो, उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने । अर्थात १० वा १२ बर्षको उमेरमा विवाह गरिदिने । छोरीलाई ‘कन्यदान’ दिएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने सोचाईले कलिलै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिने चलन थियो । धेरै पर पुग्नुपर्दैन, हाम्रा पिता-पूर्खा पनि यस्तै परिवेशबाट गुजि्रए । उनीहरुले त्यस्तो उमेरमा विवाह गरे, जतिबेला उनीहरुलाई दाम्पत्य जीवनबारे केही थाहा थिएन । अहिले
घटना डोटीको हो । आफ्नै श्रीमानले बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै एक महिला जिल्ला प्रहरी कार्यलय डोटीमा उजुरी दिन पुगिन् । खबर अनुसार उनी डोटी, शिखर नगरपालिकामा बसोबास गर्छिन् । बिहे भएको १० बर्ष पुगेको । दुई छोराछोरी समेत भएको । नेपाली परिवेशमा यो घटना दुर्लभ होइन । यसअघि यस्ता थुप्रै खबर बाहिर आएको छ, श्रीमानले